उत्तरदायी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘भक्तपुर बाई नाइट’ – indepth.com.np
३० मंसिर २०७६, सोमबार १९:११
सन्ध्याकालीन पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आयोजित भक्तपुर बाई नाइटको क्रममा परम्परागत नाच प्रस्तुत गरिँदै । तस्बिर : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । २०७२ साल बैशाख १२ को महाभूकम्पपछि ओरालो लागेको भक्तपुर नगरको पर्यटन अझै उक्सिन सकेको छैन । भूकम्पअघि यहाँका पर्यटकीय पसल, रेस्टुराँ तथा होटलहरु साँझ अबेरसम्म खुल्थे । भक्तपुर नगरका पर्यटकीय एवं सम्पदा क्षेत्रमा बाह्य पर्यटकहरुको मात्रै होइन सर्वसाधारणको चहलपहलसमेत बाक्लै हुन्थ्यो ।
सर्वसाधारण र पर्यटकहरुको आगमनले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई पनि आफ्नो पसल व्यवसाय अबेरसम्म खुला गर्न कर लाग्थ्यो । व्यस्तता बढ्थ्यो । केही बढी व्यापार हुन्थ्यो । त्यसमाथि प्रत्येक महिनाको पूर्णिमा तथा एकादशी जस्ता तिथिमा आउने नेपालभाषीहरुको जात्रापर्वसँग साँझको समयमा हुने भजनकीर्तनले सम्पदा क्षेत्रको वातावरण उल्लासमय हुन्थ्यो । सर्वसाधारणमात्रै होइन पर्यटकहरुसमेत त्यसमा झुम्मिन्थे, रमाउँथे र सन्ध्याकालीन समय बितेको चालै पाउँदैनथे ।
तर २०७२ सालको बैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले यी सबै चहलपहल, व्यस्तता, रमझममा ‘ब्रेक’ लाग्यो । भूकम्पले सर्वसाधारणका सयौं घर भत्किए । दर्जनौं सम्पदा क्षेत्र माटोमा मिले । पर्यटक आवागमन निरन्तर ओरालो लाग्यो । सर्वसाधारणको चहलपहल ठप्पै भयो । भूकम्पले घर भत्काएकाले सर्वसाधारणको बसाइ भक्तपुर नगर बाहिर हुन थाल्यो । जसले गर्दा भक्तपुर नगर र सम्पदा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चहलपहल हुनै छाड्यो ।
सर्वसाधारणको चहलपहल र पर्यटकहरुको आवागमन कम हुँदै गएपछि पर्यटन व्यवसायीहरुले आफ्नो पसल, रेस्टुराँ र होटलहरु चाँडै बन्द गर्न थाले । जसले पर्यटन उद्योग निरन्तर ओरालो लागेको लागेयै भयो ।
अहिले स्थितिमा सुधार आएको छ । भूकम्पले भत्काएका घरहरु धमाधम बनिरहेका छन्, बन्ने क्रम तीव्र छ । भूकम्पले ध्वस्त बनाएका धेरैजसो सम्पदा पुनः ठडिएका छन् । केही अझै ठडिने क्रममा छन् । सर्वसाधारणको चहलपहल निरन्तर बढिरहेको छ । बाह्य पर्यटकहरुको आवागमन पनि वर्सेनि वृद्धि भएको छ ।
तर पर्यटनसम्बन्धी पसल भने साँझ अबेरसम्म खुल्न सकेका छैनन् । भूकम्पपछि चाँडै बन्द हुने पसल अहिले पनि ढिलो गरी खुल्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा भक्तपुरमा बसेका पर्यटकहरु सन्ध्याकालीन पर्यटनको मज्जा लिन पाएका छैनन् । पछिल्लो समय भक्तपुरमा होटल तथा रेस्टुराँ खुल्ने क्रम बढेका छन् । यस हिसाबले भूकम्प पर्यटन उद्योगको लागि अवसर बनेको छ । भूकम्पले भत्काएका सम्पदा क्षेत्रका अधिकांश घरहरुमा अहिले रेस्टुराँ तथा होटल खोल्ने क्रम बढेको छ ।
यस हिसाबले भक्तपुर बस्ने पर्यटकहरुको संख्या पनि बढेको छ तर उनीहरु धेरैजसोको गुनासो हुने गर्छ, भक्तपुरमा सन्ध्याकालीन पर्यटकीय गतिविधि छैन । क्युरियो पसल तथा रेस्टुराँहरु साँझ अबेरसम्म खुल्दैनन् । प्रकाश तथा उज्यालोको व्यवस्था नहुँदा सम्पदा क्षेत्रमा साँझ दृश्यावलोकन गर्न सम्भव छैन ।
शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले भक्तपुरमा सन्ध्याकालीन पर्यटनको लागि कुनै समस्या नभएको उनीहरुको भनाइ छ तर सन्ध्यामा हामी भक्तपुरमा के गरेर बस्ने ? के होटलमा समय बिताउन भक्तपुरमा बस्ने ? भन्ने उनीहरुको प्रश्न हुने गरेको छ ।
भक्तपुर पुग्ने पर्यटकहरुको यहीं प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा भक्तपुरमा सन्ध्याकालीन पर्यटन प्रवर्द्धन भक्तपुर बाई नाइट भन्ने सोच आएको भक्तपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष रामसुन्दर भेले बताउँछन् ।
पर्यटकहरुलाई भक्तपुरमै बसाउन पहिले स्थानीय तह, पर्यटन उद्योगी व्यवसायी एवं सर्वसाधारण सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘राम्रा होटलमात्रै भएर भक्तपुरमा पर्यटकहरु बस्दैनन्’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरुलाई भक्तपुरमा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
यसको लायि यहाँका पर्यटन उद्योगी तथा व्यवसायीहरु उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायीहरुको क्षमता बढ्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
‘पर्यटन व्यवसायीहरुले यहाँका मौलिक वस्तु उत्पादन गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा टेवा दिनुपर्छ’, समितिका महासचिव दीपेशराज शर्माले भने, ‘यहाँका मौलिक एवं पराम्परागत नाचगान, सांस्कृतिक समूह, भजनभण्डलीहरुको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’
भक्तपुर बस्ने पर्यटकहरुलाई सन्ध्याको समयमा यहाँका मौलिक उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योगमा अवलोकन भ्रमण गराउने र परम्परागत नाचगान देखाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
सन्ध्याको समयमा भक्तपुरका हरेकजसो मठमन्दिरमा भजनकीर्तनको व्यवस्था गरेर यहाँ आउने पर्यटकहरुलाई सम्पदा पदयात्रा गराउन सकिने महासचिव शर्मा स्पष्ट पार्छन् ।
‘यसले बाह्य पर्यटकहरुले मात्रै होइन यहाँका युवा पुस्ताले समेत भक्तपुरको जीवनशैली, रहनसहन, कला–संस्कृति, मौलिक उत्पादन र सम्पदाबारे प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्न पाउँछन्’, उनले थपे, ‘त्यस्तै सर्वसाधारणले पनि पर्यटनको महत्व र आवश्यकता बुझ्नेछन् ।’
पर्यटनमा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर उनीहरुलाई पर्यटनबाट हुने फाइदा अनुभूति गराउन भक्तपुर बाई नाइट्स अघि बढाइएको समितिका अध्यक्ष भेले बताउँछन् ।
सम्पदा पदयात्रा सुरु
उनले भक्तपुर बाई नाइटअन्तर्गत पहिलो चरणमा भक्तपुरका सम्पदाहरुमा पदयात्रा (हेरिटेज वल्क) गराइएको जानकारी दिए ।
जुन सम्पदा पदयात्राको उद्घाटन नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशी र भक्तपुर नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले गरेका छन् ।
भक्तपुर नपा २ व्यासीस्थित पर्यटक बसपार्कबाट सुरु भएको सम्पदा पदयात्रा इन्द्रायणी पीठ, खौमा गेट हुँदै भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा पुगेको थियो । त्यहाँ सम्पदा पदयात्राका सहभागीलाई स्वागत गर्दै भक्तपुरको परम्परागत देवीनाच देखाइएको थियो ।
त्यस्तै दरबार क्षेत्रका सम्पदाहरुको अवलोकनपछि टौमढी पुगेको टोलीलाई भक्तपुरको मौलिक उत्पादन जुजु धौबाट स्वागत गरिएको थियो । त्यहाँ पनि भक्तपुरकै परम्परागत माक प्याखँ (बाँदर नाच) प्रदर्शन गरिएको थियो ।
सम्पदा पदयात्रा पुनः टौमढीबाट सुकुलढोका, गोल्मढी, इनाचो हुँदै दत्तात्रय क्षेत्र पुगेको थियो । त्यहाँ टोलीलाई नेपालभाषीको मौलिक उत्पादन योमरी खुवाइएको थियो । त्यस्तै लाखे नाचसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।
भक्तपुर बस्ने पर्यटकहरुलाई सन्ध्याको समयमा सम्पदा पदयात्रामार्फत नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउन सकिन्छ भन्ने देखाउन उक्त भक्तपुर बाई नाइट कार्यक्रम गरिएको भक्तपुर पर्यटन विकास समितिले जनाएको छ ।
कार्यक्रमले भक्तपुर पुग्ने पर्यटकहरुको संख्या बढ्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जोशीले दावी गरे ।
उनले यसले भक्तपुर पुगेका पर्यटक भक्तपुरमै बस्नेसमेत विश्वास व्यक्त गरे ।
भक्तपुर नपाका प्रमुख प्रजापतिले पर्यटकहरुलाई भक्तपुर बसाउन नपाले भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा प्रशस्त उज्यालोको लागि बत्तीको व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनले भक्तपुर पुग्ने पर्यटकहरुको संख्या बढाउन आँउदो चैत ४ देखि ८ गतेसम्म भक्तपुर महोत्सव गर्न लागिएकोसमेत बताए ।
प्रमुख प्रजापतिले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भक्तपुर नपाले यहाँका सम्पदा संरक्षणमा समेत जोड दिँदै आएको बताए ।